किन आए ११ अफगान नागरिक काठमाडौं? कसरी पक्राउ परे? :: युनिक श्रेष्ठ :: Setopati
अफगान नागरिक पक्राउ परेको सिनामंगलको फेसबुक होटल।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई आइतबार राति एउटा सूचना आयो- अफगान नागरिकहरू काठमाडौंमा गैरकानुनी रूपले बसिरहेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरिपरिका क्षेत्रमा उनीहरू बसिरहेका छन् भन्ने खबर पाएपछि प्रहरीको टोली खटियो। उनीहरू कहाँ बसेका छन् भनेर प्रहरीले गत रातिदेखि नै खोज्न थालेको थियो। त्यसैबीच प्रहरीले सिनामंगलस्थित फेसबुक नामक होटलमा बसिरहेका छन् भन्ने थाहा पायो।
प्रहरीले राति नै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएन। आइतबार बिहान मात्र ब्युरो त्यहाँ पुगेर ११ जना अफगान नागरिकलाई नियन्त्रणमा लियो।
ती अफगान नागरिकहरूले होटलका दुइटा कोठा लिएका थिए। एउटा कोठामा एकै परिवारका पाँच जना थिए। अर्कोमा छ जना।
'उनीहरू सबै जनासँग आधार कार्ड रहेछ। आउँदा भारतको आधार कार्ड देखाएपछि हामीले प्रवेश दिएका हौं। भारतको कश्मीरको कार्ड रहेछ,' होटलका म्यानेजर छवि लामिछानेले सेतोपाटीसँग भने, 'कार्ड देखाएर बस्न आएपछि दिन त पर्‍यो।'
उनीहरू नेपालमा अवैध रूपमा बसिरहेको भन्नेबारे पनि सोमबार मात्रै थाहा पाएको लामिछानेले बताए।
एउटै होटलमा दुइटा कोठा लिएर बसे पनि उनीहरूबीच खासै चिनजान नभएको ब्युरो प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले जानकारी दिए। एकै कोठामा बसेका छ जनाले पनि एकअर्कालाई राम्ररी नचिनेको बयान दिएका छन्।
'उनीहरू कोही ‍पनि कसैका आफन्त रहेनछन्। पाँच जना एकै परिवारका भइहाले। अरू छ जनाको समूहमा कसैले कसैलाई नचिन्ने रहेछन्,' प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक महतोले भने, 'दुई जना पुरूषले भने आफूहरू टाढाको आफन्त भएको बताएका छन्।'
एकअर्कालाई नचिन्ने उनीहरू कसरी एउटै होटलमा बस्न पुगे भन्ने खुलेको छैन। कसैले उनीहरूलाई सहयोग गरेर नेपाल आइपुगेको हुनुपर्ने आशंका गरिएको छ। अहिलेसम्म उनीहरू संयोगले एउटै होटलमा बस्न पुगेको देखिएको महतोले बताए।
उताबाट एक्लाएक्लै आएका र नेपाल आएपछि मात्र एकअर्कालाई चिनेको उनीहरूको भनाइ छ।
पक्राउ पर्ने अफगानमध्ये तीन जना महिला छन्। बाँकी पुरूष। उनीहरू आठदेखि ४१ वर्षसम्मका भएको प्रहरी उपरीक्षक महतोले जानकारी दिए।
महतोका अनुसार परिवारमा आठ वर्षीय बालक, ११ र १७ वर्षीया बालिका पनि छन्। बुवा भनिएका व्यक्ति पहिले गैरसरकारी संस्थामा काम गर्थे। यता अरू पनि कोही वर्कसपहरूमा काम गर्ने गरेको ब्युरोले जनाएको छ।
ब्युरोले पक्राउ गरेका अफगान नागरिकको पहिचान भने खुलाउन चाहेन।
अफगानिस्तानबाट नेपाल कसरी र किन आइपुगे भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न ब्युरोले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर महाराजगन्जस्थित कार्यालयमा ल्यायो। उनीहरूमाथि सोधपुछ गर्न भाषागत समस्या हुन सक्थ्यो। तर परिवारका बुवा भन्नेले अंग्रेजी भाषा बोल्न जान्थे। अर्को समूहबाट एक पुरूषले हिन्दी बुझ्ने रहेछन्।
प्रहरीले उनीहरूलाई दुइटा समूह बनाएर सोधपुछ गरेको हो। त्यसो गर्दा उनीहरू भारतको दिल्लीबाट स्थलमार्ग हुँदै रूपन्देहीको सुनौली नाकाबाट नेपाल भित्रिएको खुलेको छ।
छ जनाको समूह २६ दिनअघि नै काठमाडौं आइपुगेको प्रहरी उपरीक्षक महतोले बताए। पाँच जनाको परिवार भने पाँच दिनअघि मात्रै आइपुगेका थिए। छ जना असोज १२ गतेदेखि होटलमा बस्न थालेका थिए।
दिल्लीसम्म भने उनीहरू वैध तरिकाले नै पुगेका थिए। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले अफगानिस्तानको राजधानी काबुल गत जुन-जुलाइमै छाडेका थिए। त्यो समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए। बाइडेनले अगस्ट ३१ सम्म काबुलबाट सबै सेना फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका थिए।
त्यसैबीच अतिवादी विद्रोही समूह तालिबानले अफगानिस्तानका प्रान्तहरू कब्जा गर्न थालिसकेको थियो। यता नेपाल आइपुगेका अफगान नागरिक भने तालिबान काबुल छिर्नुअघि नै दिल्ली पुगिसकेका थिए।
उनीहरू आधिकारिक भिसा-पासपोर्ट बोकेर जहाजबाट दिल्ली पुगेको देखिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनीहरू तालिबानकै कारण नेपाल आइपुगेका हुन्। अफगानिस्तान फर्किन नपरे हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूले बयान दिएको स्रोतले बतायो।
'तालिबान आउन लागेको अवस्था बुझेर कतिपयले चाँडै देश छाडेको पनि देखियो। कतिपयले दिल्लीमा उपचार गराउन आएको र आफ्नो देशको अवस्था बिग्रिएपछि उता नगई नेपाल आएको भनेका छन्। तर उनीहरू कहाँ जान लागेका हुन् भन्ने खुलेन। उनीहरूले नेपाल आएर युएनएचसिआरसँग सम्पर्क गर्छौं भनेका छन्,' प्रहरी स्रोतले भने, 'जे होस् हामी जोगियौं, अफगानिस्तान जान नपरे हुन्थ्यो भनेका छन्।'
स्रोतले थप्यो, 'यहाँ बरू जेलमै भए पनि राखिदेऊ तर देश फर्किए हाम्रो ज्यान खत्तम हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।'
उनीहरूले तालिबानकै कारणले देश छाडेको हो वा होइन भन्नेबारे आफूले भन्न नसकेको प्रहरी उपरीक्षक महतो बताउँछन्। 'उनीहरू भागेरै जुन-जुलाइमै दिल्ली गएको देखिन्छ,' उनले भने, 'तर तालिबानसँग भागेका हुन् वा होइन भन्ने यकिन भएन।'
महतोका अनुसार उनीहरूको योजना भारत हुँदै अमेरिका वा अरू कुनै देश जाने थियो। तर दिल्लीमा अफगान नागरिकहरूको भीड भएकाले आफूहरूले नेपालै आउने भनेर सोचेको बयान दिएका छन्।
'नेपालबाट अमेरिका वा अरू देश जान सजिलो छ भनेर दिल्लीमा कसैले भनिदिएपछि यहाँ आएको देखिन्छ,' प्रहरी उपरीक्षक महतोले भने।
२६ दिनदेखि काठमाडौंमा रहेका उनीहरू कोठाबाट खासै निस्किँदैन थिए। बाहिर निस्किनै परे एक-एक जना गरी निस्किन्थे। तर एकपल्ट उनीहरूले सामूहिक रूपमा पशुपति चाहिँ घुमिसकेका रहेछन्।
'उनीहरूले धेरै खर्च गर्न चाहेको देखिएन। एउटै कोठामा बसेका थिए। जतिसक्दो चाँडो यताबाट निस्किन चाहेको देखियो,' महतोले भने, 'तर सकेनन्।'
उनीहरूले काठमाडौंमा कुनै काम सुरू गरेका थिएनन्। ब्युरोले उनीहरूसँगै अरू पनि आएका छन् कि भनेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान गर्न अध्यागमन विभागलाई बुझाइएको छ।
गृहको अनुरोध- परिचयपत्र नहुनेलाई घर भाडामा नदिनू
यसबीच गृह मन्त्रालयले परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई घर भाडामा नदिन अनुरोध गरेको छ।
विदेशी नागरिकहरू परिचयपत्र लुकाएर अनधिकृत रूपले नेपालमा बसोबास गरिरहेको भन्दै मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिचयपत्र नभएकालाई भाडामा नदिन अनुरोध गरेको हो।
'पछिल्ला केही दिनका घटनाबाट कतिपय विदेशी नागरिक परिचय लुकाई अनधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गरी बसोबास गर्ने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ,' मन्त्रालयले भनेको छ, 'पहिचान खुल्ने आधिकारिक परिचयपत्र नभएका कसैलाई घर, अपार्टमेन्ट, फ्ल्याट, कोठा आदि भाडामा नदिन र त्यस्ता व्यक्तिलाई कामकाजमा समेत नलगाउन सबैमा अनुरोध गरिन्छ।'
पहिचान नखुलेका विदेशी नागरिक देखिए वा भेटिए नजिकको प्रहरी चौकीमा खबर गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक ८, २०७८, ११:४२:००
तत्काल वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन काठमाडौं महानगरको निर्देशन
नि:शुल्क मास्क वितरण कार्यक्रमलाई तीव्रता
ढुंगाले थिचेर स्काभेटर चालकको गयो ज्यान
काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ५३०६ संक्रमित, सक्रिय ४७ हजार बढी
एकैदिन थपिए १० हजार २५४ संक्रमित, १६ को मृत्यु